Perfume Bottle Evolution: Mafuta akafanana, nzira dzakasiyana dzekuvhura
Nengano dzekare nengano zvakajairika, zvinonhuwira zvakare zvine nhoroondo isinganzwisisike uye yakareba. Nhoroondo refu dzave kuoma kuongorora nekufamba kwenguva, uye nzira yemafuta anoshandiswa yashanduka nekufambira mberi kwetekinoroji.
Perfume mashandisiro ekuchinja:
Mafuta, kubva kuLatin per fumum, zvinoreva kuti 'kuburikidza noutsi'. Mafuta anonhuwirira ekutanga anogadzirwa nekupisa mhute yezvinonhuwira, anoshandiswa kunamata vanamwari, inomiririra inoera uye isingadziviriki.
Chimwe chezvinhu zvakakosha zvakagadzirwa munhoroondo yemafuta, izvo zvakadaro, zvakagadzirisa zvakanyanya mabudiro emafuta, kugadzirwa kwemafuta kwakawedzera, uye kushandiswa kwemafuta kwaive kusisina kugumira kumhuri yehumambo. Munguva iyi, pefiyumu yakachengetwa mumabhodhoro ezvinonhuwira, kazhinji macorks aishandiswa sekumisa kumisa hwema kuti usapukunyuka, uye kamuti kekuongorora kaishandiswa kuzora mafuta aya pamaoko nemutsipa.
Pamberi pekuuya kwemabhodhoro ekupfapfaidza, mafeni aiwanzoshandiswa kupuruzira pefiyumu.Donhedza pefiyumu pane fan kuti ibudise kunhuhwirira panguva yekushandisa.Uye iyo fan peji rezvinhu dhizaini yakakosha, inokodzera kwazvo kupinza zvinonhuwira, inogona kuita kunhuwira kune fan chengetedza kwenguva yakareba.Kubva pakuuya kwezvinonhuwira zvinonhuwira, mafeni ave maturu ekuratidzira muzvitoro zvemafuta.
Muna 1907 kuberekwa kwemafuta ekuzora ekutanga ("maPefiyumu") ndiko kutanga kwekutanga munzira yekushandisa pefiyumu. Inoshandura pefiyumu yemvura kuita zvidimbu zvidiki uye inoimwaya iri muchimiro chekupfapfaidza kubva mumusoro unosasa. kwakaburitsa indasitiri nyowani, vagadziri vachigadzira isina, yekushongedza-pamabhodhoro anokurudzira vanhu kuti vachengetedze zvinonhuwira zvavanoda kwenguva yakareba sezvazvinogona
5.Chishamiso uye Atakor muma1930
Iyo pefiyumu atomizer yenguva ino ine maviri marudzi emusoro wekusasa, izvo zvinoonekwa pakutanga pefiyumu yeairbag spray, poda mafuta anonhuwira kuti utore airbag zvinyoro nyoro paunenge uchishandisa, inogona kumwaya mhute inotapira.
6.Rimwe remabhodhoro ezvinonhuwirira akakurumbira e1907
Kuuya kwekutsikirira mapiritsi kwaita kuti nguva yekuchengetedza zvinonhuhwirira igare zvakanyanya.Kusvika parizvino, zvinonhuwira zvakanyanya ndezvekushandisa yekutsikisa inosasa musoro, pfapfaidza pefiyumu kuburikidza nemushini wekusasa musoro.
7.Le Sien, Amour-Amour uye Que Sais-Je1925-1928
Kubata ziso revatengi, vagadziri vakashanda nesimba pakugadzira uye kurongedza kwemabhodhoro ezvinonhuwira. Coty yakadira pefiyumu mugirazi refu-chitsitsinho shangu, inoyevedza uye inoyevedza. Bhodhoro rega rega reMarotte rine rakasiyana ngowani chimiro, chic uye hupfumi hwehucheche; Bhodhoro dhizaini reShalalimar rakafemerwa neiyo Shalimar gadheni tsime. gara uchikwezva kutarisisa kwemukadzi munguva yekutanga.
COMI AROMA – inokupa iwe mhando dzemafuta emabhodhoro egirazi, hombodo yepamusoro yegirazi, ita kuti pefiyumu yako ive nani.